WARBIXIN: 2018-ka inta dal ee Passportka Soomaaliga lagu gali karo Visa la,aan…[visa-free] Jan 18, 2018 - jawaab
Ma sahlana mana fududa dal ay aafeeyeen colaado iyo dagaalo sokeeye ragaadiyeen in uu tartaran la galo wadamo ay nabad iyo amni iyo horumar ka socdaan.
Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya iyada oo ka duuleeso duruufaha adage ee ku hareereesan dalka ayuu agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya G/Sare Mohamed Adam Jim’ale (Kofi) juhdi iyo dadaal adag ku bixiyay sidii uu u tayeen lahaa passportka Soomaaliga una aqoonsan lahaayeen wadamada caalamka, wuxuu geed dheer iyo mid gaaban u fuulay agaasimaha guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyada sidii ruuxa Soomaaliga uu ugu safri lahaa passporrkiisa.
Sidoo kale wuxuu safaro badan oo kala har laheyn ku bixiyay qaaradaha caalamka, socdaalka uu agaasimaha ugu adeegayo qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed ayaaa noqonaya mid ay beesha caalamka iyo saxaafadaha caalamka in ay soo bandhigaan mira dhalka dadaalkiisa taas oo sanadkaan noqotay in ay sare ukacdo inta wadan uu ruuxa Soomaaliga ku safri karo passportkiisa visa la’aan.
Henley Global oo ah shirkad sanad waliba qiimeen ku sameeso passports caalamka ayaa sanadkaan warbixinta ay soo saartay (01 Jan 2018) ku sheegtay in passportka Soomaaliga ah lagu tagi karo visa la aan ilaa 32 dal oo caalamka ku yaalo (visa free score).
Halka https://www.passportindex.org/ uu sanadkaan 2018 ka dhigay tirada 34 wadan inta passportka Soomaaliga lagu tagi karo visa la’aan.